မွန်အမျိုးသားညီလာခံ မေလ ပထမပတ် တွင် ပြုလုပ်မည်
သတင်း February 5, 2015
မော်လမြိုင်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၅ ။ ။ မွန် လူမျိုးများ သွေးစည်းညီညွတ်ရေး အတွက် ဆွေးနွေးမည့် မွန်အမျိုးသား ညီလာခံ ကို မေလ ပထမပတ်တွင် ဘုရားသုံးဆူဒေသ ဂျပန်ရေတွင်းကျေးရွာတွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည် ဖြစ်ကြောင်း မွန်အမျိုးသားရေးရာအဖွဲ့ချုပ်မှ...
1...5,6305,6315,6325,6335,633 ၏စာမျက်နှာ 5,631
ရခိုင်၊ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာ မြို့နယ်များအပါအဝင် တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမည်
သတင်း July 1, 2020
ရန်ကုန် ၂၀၂၀ ဇူလိုင် ၁ မကြာမီ နိုဝင်ဘာလတွင် ကျင်းပရန် ရှိသည့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်အပါအဝင် တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေရာဒေသများ၌လည်း ဆန္ဒမဲခံယူ ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ထုတ်ပြန်ချက်များအရ သိရသည်။ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ဇွန် ၂၉ ရက်စွဲဖြင့် ကြေညာချက်များထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်လွှတ်တော် စသဖြင့်...
ဆောင်းပါး July 1, 2020
ရွှေစင်ခက် (ဘာသာပြန်သည်) HI Burma Jun 26, 2020 လက်ရှိ ကမ္ဘာတဝှမ်းမှာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ကူးစက်ပြန့်ပွားနေတဲ့ Covid-19 ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကပ်ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးက အစိုးရခေါင်းဆောင်တွေဟာ နည်းဗျူဟာအမျိုးမျိုးနဲ့ ကြိုးစားတုံ့ပြန် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနေကြပါတယ်။ ဒီကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြား သူတို့ရဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုအရည်အချင်းကို စစ်ဆေးနေတဲ့ အကြီးမားဆုံးသော စမ်းသပ်မှုတစ်ခုကြီးလို့ ဆိုနိုင်သလို...
ကိုဗစ် -၁၉ ကြောင့် ပြည်ပမှ ပြန်လာသူများအတွက် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင် အခွင့်အလမ်း ဖန်တီးပေးမည်
သတင်း June 29, 2020
ရန်ကုန် ၂၀၂၀ ဇွန် ၂၉ ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရောဂါဂယက်ကြောင့် ပြည်ပနိုင်ငံအသီးသီးမှ ပြန်ရောက်လာသူ အင်ဂျင်နီယာများ၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် လုပ်သားများအတွက် မြန်မာနိုင်ငံ ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်(MCEF) က ပြည်တွင်း၌ လုပ်ငန်းခွင် ဖော်ဆောင်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ "ဆောက်လုပ်ရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ အင်ဂျင်နီယာတွေ၊ ကြီးကြပ်ရေးမှူးတွေ၊ နောက် ဆောက်လုပ်ရေးကျွမ်းကျင်တဲ့...
ကိုဗစ်နိုင်တင်းရောဂါပိုးကင်းစင်လာသူ ပြည်ပပြန် သုံးဦး ထပ်တိုး၊ ပေါင်း ၂၀၀ ကျော် ရှိလာ
သတင်း June 26, 2020
ရန်ကုန် ဇွန် ၂၆ ဇွန် ၂၅ တွင် နိုင်ငံအနှံ့မှ ပေးပို့သည့် ဓာတ်ခွဲနမူနာ ၂၀၀၀ ကျော်ကို အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန(ရန်ကုန်) (NHL)အပါအဝင် ဓာတ်ခွဲဌာန ငါးခုက နှစ်သုတ်ခွဲ စစ်ဆေးခဲ့ရာ ကိုဗစ်နိုင်တင်း ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာသစ် မတွေ့ရှိခဲ့ဘဲ လူနာဟောင်းများအနက် နှစ်ကြိမ်ဆက်တိုက် ပိုးမတွေ့ရသူ သုံးဦး ရှိလာသည်။ ပထမအသုတ်...
Feature June 18, 2020
Written by Moe Moe HI Burma Jun 4, 2020 “ညဆို အိပ်မပျော်ဘူး။ အိပ်ရင်း ထထိုင်မိတယ်။ ဒီအကြွေးကို ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ ပြန်ဆပ်ရမလဲ စဉ်းစားမိတိုင်း အိပ်မပျော်ဘူး” အသက် ၅၀ အရွယ်ရှိတဲ့ ဒေါ်အေးသန်းက ပြောလိုက်တာပါ။ ဒေါ်အေးသန်းဟာ မကွေးတိုင်း ကြာကန်အုပ်စု လေးအိမ်ကျေးရွာက အိမ်ရှင်မတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်းကနေ...
COVID-19 အလွန် မြန်မာ့စီးပွားရေး
အတွေးအမြင်ဆောင်းပါး June 12, 2020
Written by မင်းကံစီ COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း၌ စီးပွားရေးအရ ထိခိုက်နစ်နာမှု ကိုယ်စီ ရှိလာနေသည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံရော ဖွံ့ဖြိုးဆဲတိုင်းပြည်ပါ ဆင်းရဲချမ်းသာမရွေး နိုင်ငံအသီးသီးသို့ COVID-19 ဂယက်က ရိုက်ခတ်လျက်ရှိသည်။ တကယ်ဆိုတော့လည်း စီးပွားရေး၊ ကုန်သွယ်ရေး၊ စက်မှုလက်မှုသာမက ကျန် နယ်ပယ်အရပ်ရပ်၊ ကဏ္ဍအမျိုးမျိုးတွင်လည်း COVID-19...
Videos February 24, 2020
“ဒေသခံတွေ သွားလျှောက်ရင် မရဘူး လျှောက်လွှာလည်း မပေးဘူး ဘယ်လိုလျှောက်ရမယ်ဆိုတာ နည်းလမ်းတွေလည်း မပြောဘူး အဲဒီတော့ ငွေရှင် ဓနရှင် ရင်နှီးမြှုပ်နှံနိုင်တဲ့ ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေလောက်ပဲ လိုလိုလားလားနဲ့ ထုတ်ပေးတာတွေ ဒါတွေက မဖြစ်သင့်ဘူး”
မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၅) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေးဆောင်ရွက်ချက်အနှစ်ချုပ်
တင်ဒါရွေးချယ်ရေး ကိစ္စကြောင့် ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် သဘောထားကွဲလွဲပြီး နောက်ဆုံး ဝန်ကြီးရာထူးမှ နုတ်ထွက်ခဲ့တယ်လို့ဆို
Videos February 19, 2020
Sanghe ဆိုင်ကယ် Showroo ဖွင့်ပွဲ
ဆံတော်ရှင်ကျိုက်သုတ်စေတီတော် ဆဌမအကြိမ်မြောက်(သီလရှင်ဝတ်စုံ) လှူဒါန်းပွဲ နှိုး ဆော် စာ
Written by Moe Moe HI Burma Jun 4, 2020 “ညဆို အိပ်မပျော်ဘူး။ အိပ်ရင်း ထထိုင်မိတယ်။ ဒီအကြွေးကို ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ ပြန်ဆပ်ရမလဲ စဉ်းစားမိတိုင်း...
ဂျာကာတာ မတ်လ ၁၈ရက်နေ့တွင် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအတွင်း COVID-19 ကြောင့် သေဆုံးမှုအသစ် ၁၄ ခုထိ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး သေဆုံးသူ စုစုပေါင်း ၁၉ ဦးထိရှိပြီဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်နိုင်ငံ၏ တစ်နေ့တာအတွင်း သေဆုံးမှုအနက်အများဆုံးဖြစ်သည်။ COVID-19 ကူးစက်ရောဂါဆိုင်ရာ အစိုးရပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ...
နိုင်ငံတကာသတင်း February 18, 2020
သေနတ်သမားနှင့် သေဆုံးသူအမျိုးသမီးသည် မကြာမီကမှ ကွာရှင်းခဲ့သည့် လင်မယားဟောင်းများဖြစ်ပြီး သဝန်တိုမှုနှင့်ဆိုင်သည်ဟု အာဏာပိုင်များက ပြောသည်။ ဘန်ကောက် - ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့လယ်ခေါင်ရှိ ဈေးဝယ်စင်တာတစ်ခုတွင် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၈ ရက် နေ့လယ်ပိုင်းက ပစ်ခတ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် အမျိုးသီးတစ်ဦးသေဆုံးကာ လူတစ်ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်ဟု ကယ်ဆယ်ရေးသမားများက ပြောသည်။ ပစ်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်သည် Victory Monument အနီး...
နိုင်ငံတကာသတင်း February 6, 2020
ဂျာကာတာ အင်ဒိုနီးရှားအာဏာပိုင်များ ဘာလီကျွန်းတွင် ၀က်ကောင်ရေ ၈၈၀ ခန့်သေဆုံးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်နေကြောင်း စိုက်ပျိုးရေး၀န်ကြီးဌာနမှ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးညွှန်ကြားရေးမှု ဖေဖော်ဝါရီ ၅ ရက်တွင်ပြောကြားခဲ့သည်။ ဝက်များသည် ဒီဇင်ဘာမှ ဇန်နဝါရီလအတွင်း သေဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အာဖရိက​ဝက်အပြင်ဖျားရောဂါကြောင့် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း ဆူမားတြားပြည်နယ်တွင် ဝက်ကောင်ရေ ၄၃၀၀၀ ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီး ဘာလီက ဖြစ်ပွားမှုကို အတည်မပြုနိုင်သေးကြောင်းဆိုသည်။ “ ဝက်တွေ...
နိုင်ငံတကာသတင်း January 25, 2020
ဝူဟမ် တရုတ်နိုင်ငံ ဟူဘေးပြည်နယ်ဆေးရုံမှ ဆရာဝန်တစ်ဦး သည်ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်သေဆုံးသွားခဲ့ကြောင်း China Global Television Network မှစနေနေ့ (ဇန်နဝါရီ ၂၅) တွင် တွစ်တာမှတဆင့်ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။ ဝူဟမ်မြို့ ဟူဘေးရှင်ဟွား ဆေးရုံမှ အသက် ၆၂ နှစ်အရွယ်ရှိ ဆရာဝန် Liang Wudong သည် ဝူဟမ်ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်သေဆုံးခဲ့သည်။ စနေနေ့တွင်တရုတ်အာဏာပိုင်များက ရောဂါဖြစ်ပွားမှုပေါင်း...
နိုင်ငံတကာသတင်း January 24, 2020
စင်ကာပူ စင်ကာပူရှိ နောက်ထပ်လူနှစ်ဦးသည် ဝူဟမ်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံထားရသောရောဂါလက္ခဏာများတွေ့ရှိခဲ့ပြီးစုစုပေါင်းရောဂါကူးစက်ခံရသူ သုံးဦးအထိဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟု ကျန်းမာရေး ၀န်ကြီးဌာနကသောကြာနေ့ (ဇန်နဝါရီ ၂၄) တွင်ကြေငြာခဲ့သည်။ ပထမဆုံးတွေ့ရှိသူမှာ အသက် ၆၆ နှစ်အရွယ် ဝူဟမ်မှလာသူဖြစ်ပြီး စင်ကာပူကို ဇန်နဝါရီ ၂၀ ရက်က ကွမ်ကျိုးမှတဆင့် စင်ကာပူကိုရောက်ရှိခဲ့ဖြစ်သည်ဟု ကျန်းမာရေး၀န်ကြီးဌာနက ကြာသပတေးနေ့တွင်ကြေငြာခဲ့သည်။ ဒုတိယကူးစက်ခံရသူမှာ အသက် (၃၇) နှစ်အရွယ်ရှိပြီး ပထမဆုံးရောဂါကူးစက်ခံရသူ၏သားဖြစ်ကြောင်း...
Channel H Application
In Channel H , you can watchavarious number of categories including ~ Latest News ~ Latest Feature Videos ( News ) ~ Debates ~ Short Films ~ Cartoons ~ Food And Travel ~ Music ~ Funny